ikhaya AMAZIKO E-EUROPEAN FOOTBALL Abadlali bebhola baseDatshi I-Quincy Promes Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold
I-LB iveza iNqaku elipheleleyo leMidlalo yeBhola eyaziwa ngegama lesidlaliso "Imali yeWolf". Ibali lethu leQuincy Promes yobuntwana kunye ne-Untold Biography Facts ikulethela iakhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawuleyo ukususela ngexesha lakhe lobuntwana ukuza kuthi ga ngoku.
Ubomi kunye nokuPhakama kweQuincy Promes eboniswe nguLifeBogger. Imifanekiso eqingqiweyo- Instagram kwaye Twitter
Ukuhamba kubandakanya ubomi bakhe bangaphambili / imvelaphi yosapho, imfundo / ukwakha umsebenzi, ubomi bobuchule bakhe bokuqala, indlela eya kudumo, ukunyuka kwibali lodumo, ubomi bobuhlobo, ubomi bomntu, iinyani zosapho, indlela yokuphila kunye nezinye iinyani ezingaziwayo ngaye.
Ewe, wonke umntu uyazi Unetalente engathethekiyo ngeliso lokubonisa isantya kunye nokufumana amanqaku. Nangona kunjalo, bambalwa kuphela abalandeli bebhola abaqwalasele i-Quincy Promes Biography yethu enomdla kakhulu. Ngoku ngaphandle kokudibanisa okunye, masiqalise.
I-Quincy Promes Dembele Ibali lobuNtwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Ubomi bokuqala kunye neNtsapho yaseMvelaphi
UQuincy Anton Promes wazalwa kwi Umhla we-4th kaJanuwari 1992 kunina (ongumgcini wendlu) noyise (owayengumdlali webhola) kwisixeko saseAmsterdam, eNetherlands. Weza emhlabeni omnye woonyana ababini abazelwe abazali bakhe abathandekayo baseSurinam abafanekiselwe ngezantsi.
Dibana nabazali bakaQuincy. Ityala elinomfanekiso Instagram
Nangona azalelwe eNetherlands, uQuincy Promes unosapho lwayo oluvela eSuriname, ilizwe laseMzantsi Melika kunye ne-Netherlands eyayihlala yona. QAPHELA: Eli lilizwe-ngabalandelisi bebhola abalandelayo; UClarence Seedorf, uEdgar Davids noJimmy Floyd Hasselbaink yavela.
UQuincy uzisa imvelaphi yosapho: Abazali bakhe ukongeza kwiintsapho ezininzi zaseSuriname babephakathi kwabo bafudukela eNetherlands kulo lonke ixesha le-1990s ngenxa yemeko yezoqoqosho enzima kwilizwe laseMelika eseMelika. Kwakhona qaphela, tyena abantu baseSuriname baneengcambu zeentsapho zabo ukusuka kumazantsi e-Sahara e-Afrika uninzi lwabo lwenkcubeko yaseNtshona. Jonga apha ngezantsi imephu encinci ecacisa ukuba iQuincy Prives iyaziselela neengcambu zosapho.
UQuincy ubuyisa iingcambu zoSapho zichaziwe. Ityala elinomfanekiso I-ULC
Iminyaka Yokuqala: I-Qunicy Promes ikhule kunye nomntakwabo ongaziwa kancinci e-Amsterdam, eNetherland. Wayengaveli kwimvelaphi yosapho olufumileyo. Ngapha koko, abazali bakhe babefana nabanye abafudukayo esixekweni ababesenza imisebenzi ephantsi kwaye bengazange bafumane imfundo efanelekileyo ngomsebenzi onqabileyo onekhola emhlophe. Kwangoko esemncinci, uPrince wayengenamdla wokuqokelela izinto ezintsha zokudlala njengeefomu zesipho abazali bakhe, kuphela yibhola ekwaneliseka yiyo.
UQuincy Promes waqala ukudlala ibhola ngalo lonke ixesha lokuhamba kwakhe. Ityala elinomfanekiso Twitter
I-Quincy Promes Dembele Ibali lobuNtwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Imfundo kunye neBraduer Buildup
Ngokophando, olona hlobo lubalaseleyo lokufumana imfundo yebhola ukusuka kwi6 ukuya kwi10. Okwenzileyo, kwaqala kanye ukusuka ngexesha awayenokuhamba ngalo, yonke into ebulela kutata wakhe owenza iinzame zokuqhubeka nokuphila ngamaphupha akhe ebhola ngonyana wakhe. Utata katata owayekade ebengumdlali webhola e-Amateur eSuriname ngaphambi kokuba afudukele eNetherlands. Ukuba nomntu othanda ibhola ekhatywayo ngotata, kwakulula ngePrins ukuba uthandane nomdlalo omnandi.
Umvuzo weQunicy Umam ebengalunganga ngebhola yakhe: Ukuqhubeka nokuphila ngamaphupha akhe ebhola katata wakhe, u-Promes kwangethuba wavumelana notata wakhe, ukuba uza kuba ngumdlali webhola. Wayenenzondelelo ethembekileyo kwithunywa yokuba abe ngumphathi wefilimu, ohlobo lwayo lwambona edlala ibhola kusasa, emva kwemini nangokuhlwa. Olu phuhliso aluzange luhambisane kakuhle nonina owayechaphazeleka ngeMivuzo yakhe emincinci engafundanga ngokwaneleyo, ukuhlala ngaphandle kude kangako engakhumbuli ukwenza imisebenzi yakhe yasekhaya kunye nomsebenzi wasekhaya. Ngenxa yoko, maxa wambi uPrince wayezakubekwa ngumama wakhe. Ukufumana u-tamil ngaphakathi kuye akuyekanga amabhongo akhe ukuba abe yi-pro.
Iminyaka yokuQala yeziQiniso zikaQuincy. Ityala elinomfanekiso Instagram
I-Quincy Promes Dembele Ibali lobuNtwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Ubomi bokuqala
Unoyolo luveza amalungu osapho lwakhe kubandakanya umama wakhe owayenamathandabuzo malunga nomsebenzi wakhe wexeshana ngaphandle kwemida xa uPromes wadlula izilingo ze-Ajax kwaye wazibhalisa kwiklabhu yakhe yasekhaya. Ngeli xesha lokufunda, Prives senziwe isithixo URonaldinho. Nangona kunjalo, utata wakhe wayeqhubeka nokuba ngumzekelo wakhe obalaseleyo, owayenaye kuyo yonke iminyaka yakhe yobudala kunye ne-Ajax.
UQuincy uzisa Ubomi bobuNtshatsheli ngeBhola. Ityala lemifanekiso: Instagram
Njengoko uQuincy U-Prives uqhubekile nokuvuthwa, wazibona sele ehleli kakuhle ebomini kunye ne-Akhademi. Wayenguye uhlobo oluphumayo lomntwana- luhlobo lwenkokeli eyongamele imicimbi yeqela lakhe. Apha ngezantsi kukho isiqwenga sobungqina bevidiyo yomntwana onesibindi njengoko esenza imisebenzi yakhe yobunkokeli ngeAjax TV.
I-Quincy Promes Dembele Ibali lobuNtwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Indlela eya kwiNdaba ibali
Xa i-Tohing is Hard T: Ngexesha wayeneminyaka eyi-16, uQuincy Promes 'waqala ukungena kuzo zonke iintlobo zeengxaki kunye nolawulo lweklabhu. U-Ajax wammangalela ngokubonisa isimilo esibi, Uphuhliso olwalusongele izidanga zakhe zemfundo kwaye hlala eklabhu. Okulusizi kukuba kunyaka we-2008 (useneminyaka eyi-16), Imvumelwano kaPromes ne-Ajax yapheliswa kwaye waxelelwa ukuba ayeke iklabhu ngenxa yento eyayibizwa ngokuba “kukuziphatha kakubi”.
Phantse Ukuyeka Ibhola: Ukhatywa kwi-Ajax kwabangela iintlungu ezininzi kangangokuba uPhumlo wacinga ngokuyeka ibhola. Kwathatha umzamo wabazali bakhe (ngakumbi umamakhe) ukumcenga ukuba abuyele kwibhola ekhatywayo, kumenza aqonde ukuba- Oyena titshala ubalaseleyo yayikukusilela. Utyebo kungekudala wabona ukuba kulungile ukwenza iimpazamo kwaye oko kwamnceda ukuba akhule abe ngumntu ongcono.
Ukuqhubeka: Ipumelelo yafumana enye iklabhu- i-HFC Haarlem apho wayedlala khona unyaka ngaphambi kokuba iklabhu iye kubhengezwa. Kanye ngaphambi kokuba abhengezwe njengongenamali, wafuna ukubalekela ngokuya kwizilingo kunye ne-FC Twente eyamvumela ukuba ajoyine iziko labo lokufunda.
I-FC Twente ingqineke ilinyathelo elifanelekileyo kuye njengoko wayefumana isidanga semfundo kunye nelungelo lokudla kwiqela labadlali. Ukufunda kwimbali yakhe yangaphambili, Inzuzo yaqala ukubonisa ukukhula okuqaphelekayo kokubini kunye nangaphandle kwephambo. Kwakwelo xesha linye, indlela yakhe yokuziphatha evuthiweyo yambona efumana ukapteni weJong FC Twente ngumbali ongumDatshi kunye nomqeqeshi, uPatrick Kluivert. Uye wenza inkqubela phambili kwimali mboleko kunye neklabhu yaseDatshi egama lingu 'Yiya phambili Eagles'apho adibana khona no-Erik ezilishumi uHag kwaye waba ngumdlali wakhe obalaseleyo. Kwakungenjalo ukuba uPrince wayesazi ukuba ukuthembeka kwakhe kuzakwenza u-Erik ishumi uHag (umqeqeshi weAjax kwikamva) angaba yindoda ukuba ayibuyisele kwi-Ajax, iklabhu yamaphupha akhe.
UQuincy Promes kunye no-Erik ishumi uHag basebenze kunye kangangexesha elithile kwi-Go Ahead Eagles. Ityala elinomfanekiso I-AdNl
Isigqibo Esikhulu: Ngaphandle kwento yokuvuthwa, Inzuzo yayizimisele ukudlala kakuhle, fumana izibonelelo ezingcono kunye nokuxoxa ngemali ezinkulu. Ukuphupha makhulu, abadlali bakhe babedlala amahlaya, besithi ngu "Imali yeWolf". Emva kokufumana amanqaku e-11 kwi-FC Twente kunye nenye i-13 yokubolekwa kwemali-mboleko Yiya kwiklabhu yebhola ekhatywayo, Iimpawu zempumelelo zaqala ukutsala umdla wokubamba iiklabhu zaseYurophu.
I-Quincy Promes Dembele Ibali lobuNtwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Ukunyuka Kwidumo Ibali
Izinto ezintle zaqala ukuza ngendlela yakhe. Okokuqala, uPrince wafumana umnxeba ovela kwiqela lesizwe laseDatshi. Okwesibini, uthethathethwano kunye neSpartak eMoscow lubangela intshukumo yemali enkulu njengoko wayehlala ecinga njalo. Abantu abaninzi babethandabuza ukhetho lwePromes lokukhetha iRussia abayirhanelayo IMALI wayengekho: I-1 ibalulekile kuye kwaye ayisiBhola. Oku kumbone esibiza igama kwakhonaImali yeWolf".
Ubomi eRashiya: Inzuzo ishiyekele iRussia isencinci kangaka, kunye neseti yengqondo yokubonakalisa abagxeki bayo ukuba ayilunganga. Ngeli xesha wayeseRussia, wenza ingxelo kubutyebi bakhe ngaphambi kokusebenza kwensimu. Ngokumalunga nokubonisa ubutyebi bakhe, uProut wenza iividiyo apho abonisa iimpahla ezixabisa kakhulu, izinto azithengileyo ngeemali edibene nokuphakanyiswa kweendaba kwigumbi lakhe lokulala. Oku kuphakamise ukuthandabuza ezingqondweni zabalandeli ukuba ingaba iProper iyakwazi na ukuphatha ubomi njengomdlali webhola. Emva kweengcinga ezithile malunga nokuziphatha kwakhe kubuya ukuze amzingele, uPrince uthathe isigqibo sokucima zonke iividiyo, abuyele emuva egxile emsebenzini wakhe.
Iziqalo zinesiqalo esihle kwinkqubela phambili yomsebenzi wakhe waseRussia njengoko wayethathe inani leenjongo kwaye ehambisa inani labancedisi. Umdlali onobuchule be-pacy ovuthiweyo ekukhuleni kwakhe waba ngumdlali onetalente kakhulu kwindiza ephezulu yaseRussia njengoko waphumelela iqela leqela lezemidlalo kwibhaso lenyanga. Ukuthulisa abagxeki bakhe, uPrince waqhubekeka ukuba ngowona manqaku aphezulu kwiligi. Iinjongo zakhe zanceda uSpartak eMoscow ukuba aphumelele i-Premier Premier League (2016-2017), iRussia Super Cup (2017) kunye nomdlali wexesha le-2.
UQuincy uQhamukela ukuDumisa iBali- Uwine yonke into ekhoyo ukuphunyezwa eRussia. Ityala elinomfanekiso Twitter kwaye Instagram
Endaweni yokuqunjelwa, ubuhlakani bebhola ekhuleni busuka kumandla ukuya kumandla, ukushukumisela ukuya I-Sevilla kunye ne-Ajax kamva, apho abuyisele khona iidesi zakhe. Ngexesha lokubhala, uQuincy Promes uphakathi kwe umgca wokuvelisa ongapheliyo webhola ekhatywayo elimangalisayo elivuselela ibhola yeDatshi emva kokusilela kweNdebe yeHlabathi yeBhola ekhatywayo. Ezinye, njengoko besitsho, yimbali ngoku.
I-Quincy Promes Dembele Ibali lobuNtwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Ulwalamano lobomi
Nge-Rise to Fame yakhe kwibhola ekhatywayo, kuyacaca ukuba uninzi lwabathandi bebhola, ngakumbi ababhinqileyo ababhinqileyo kufuneka bazibuze ukuba ingaba uQuincy Promes unentombi okanye nokuba akatshatanga na kwaye usafuna.
Ngubani uQuincy Uza Intombazana enguMlingane?… Ngaba awatshatanga kwaye uyakhangela?
Akukho nto iphikayo into yokuba uQuincy Promes ubukeka obuhle, ukukhula, ukudityaniswa nomsebenzi awenze ngembeko ayizukumenza abe ngumyeni ongcono nomyeni (okwangoku ngela xesha lokubhala). Emva komdlali webhola ophumeleleyo, kukho umfazi oqaqambileyo. UPrince utshatile unkosikazi wakhe (ofanelwe ngezantsi) kwaye bebonke, banabantwana abathathu- amantombazana amabini kunye nenkwenkwe.
Umntwana wabo wesithathu, ogama linguNoakin, wazalwa nge-8 ngoMeyi 2017, nje emva nje kokuba iSpartak Moscow iqinisekiswe ukuba yintshatsheli yeligi.
Ubusazi?… Umfazi kaQuincy Promes wazala unyana wakhe wokuqala kunye nomntwana wesithathu (uNowaquin Unikezwe Promes) kwi-8th kaMeyi 2017 emva nje kokuba iSpartak yaseMoscow yaqinisekiswa njengengqwele yeqela.
Njengokuziphatha kwakhe kwangaphambili, umtshato kaQuincy Promes uye waba nesiphithiphithi kumaxesha akutshanje. Kwangexesha elithile, uPromes waziswa ekuqwalaselweni kwamehlo oluntu xa wabanjwa ngenxa yokubetha umfazi wakhe ngoJuni 2018. Yena wakhutshwa ngebheyile, ngelixa kuqhubeka uphando.
I-Quincy Promes Dembele Ibali lobuNtwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Ubomi bomntu
Ukwazi uQuincy Ubeka uBomi bobuqu kwisandi kuya kukunceda ufumane umfanekiso ogqibeleleyo wobuntu bakhe.
Ngaphandle kwesandi, uXabiso uchitha ixesha kunye nomhlobo wakhe osenyongweni- Memphis Deplay. Nokuba badlala kumazwe amabini ahlukeneyo (ngexesha lokubhalwa), isibini esihlala sithetha kunye yonke imihla. NGOKU, Ziintoni ezinje ngazibini?… Impendulo yile Umculo kunye neeTattoos.
Ukwazi uQuincy uzisa Ubomi bobuNtu pha kwiPitch. Ityala elinomfanekiso DailyMail kwaye Ilanga
Ubusazi?… Inzuzo eyakukhupha i-rap entsha eyinqaba kunye ne-kumazwe aphesheya Memphis Deplay. Banxibe imixokelelwane emikhulu yegolide ebizayo, ividiyo yabo ye-rap yaqala ngesi sibini sihleli kwaye behleka kwiRolls Royce enqabileyo ngaphambi kokubeka ubucwebe babo ngaphezulu kwemoto. Memphis Depay Uqale ukukhahlela ngaphambi kokuba uPhindlo azuze lukhulu. Apha ngezantsi kukho isiqwenga sobungqina- I vidiyo.
Ngakumbi kuQuincy Promes Life, yena unendalo Rhashiya- lelona lizwe likhulu kwihlabathi lamenza ukuba afumane ezona zinto zibalaseleyo. Ebusika, uPromes uye wabona iidolophu zigutyungelwe ngumkhenkce omhlophe qhwa, okwenza yonke imbonakalo ikhethekile kwaye yahlukile. Kwezinye iindawo zendalo azityelelayo, indawo enekhephu (njengoko kubonisiwe ngezantsi) Inomdla wokwazi- sesinye nje isizathu sokuba athandane neRussia.
UQuincy Promes Ubomi boBuntu kude nebhola- umbono wakhe kunye namava aseRussia. Ityala Twitter
Okokugqibela kukukholelwa kwakhe ukuba abalandeli bebhola baseRussia abangohlanga. UQuincy Promes usapho bafumana eyona iRussia kulo lonke ixesha lokuhlala kwabo, ngelixa wayedlalela iSpartak Moscow. Umdlali webhola ekhatywayo akazange nabazali bakhe bahlangane nobuhlanga nangona kukho inkolelo eyaziwayo yokuba ubuhlanga buyindalo kule dolophu.
I-Quincy Promes Dembele Ibali lobuNtwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - yokuPhila
Iinyani zokuphila zikaQuincy Ubomi ngokuqinisekileyo bunokukunceda ufumane umfanekiso opheleleyo wenqanaba lakhe lokuphila eliqondwayo. MUkuphosa imali eninzi ngebhola kudlula kwindlela yokuphila engaqhelekanga ebonwa ngokulula yimoto yakhe eqolileyo yeMercedes eboniswe ngezantsi.
UQuincy uzisa UbomiStyle- Uqhuba imoto engaqhelekanga
Kwindlela yokuphila, ukuthatha isigqibo phakathi kokusebenziseka kunye nolonwabo okwangoku akukho lukhetho olunzima kwimbuyekezo. Umdlali webhola ojongayo uhlala emhle akabonwa nje ngokugqwesa kwakhe kwisandi kodwa amandla okuthenga iiwotshi ezibizayo kwaye aphile amaphupha akhe olwandle.
UQuincy uzisa UbomiStyle- Imibuzo malunga nokuchitha imali yakhe kuyo. Ityala elinomfanekiso Instagram
I-Quincy Promes Dembele Ibali lobuNtwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Ubomi Bentsapho
Ukuphuhliswa kwebhola ekhatywayo njengabo bonke abantwana kufuna uncedo lwamalungu osapho, ngakumbi bobabini abazali, abazali bakaQuincy Promes bammele, ebanceda ukuba bafike apho akhoyo namhlanje.
Prives ngexesha lokubhala bahlala eAmsterdam kunye nenkosikazi yakhe, abantwana babo abathathu, abazali bakhe kunye nomntakwabo. Ukudityaniswa kuluntu lwaseDatshi, amalungu osapho lwakhe ngoku bavuna izabelo zokuba nezinto zabo (umntu ophatha ukutya) Ukudala eyakhe indawo yosapho lwakhe kwinkululeko yezemali, sonke siyabulela kumdlalo webhola ophumeleleyo. Inzuzo sees her mum njengemqolo yakhe kunye nalowo wamkhuthaza kakhulu ukuba abuyele ebholeni xa wayehluthwe yi-Ajax.
UQuincy Promes ubonakala esondele kakhulu kumama wakhe kunotata wakhe. Ityala elinomfanekiso Instagram
I-Quincy Promes Dembele Ibali lobuNtwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Inyaniso engekho
Ukuhlikihla iibhlukhwe ngeBusta Rhymes: Obu budlelwano be-Symbiotic phakathi kwebhola kunye nento esinokuthi ngokubanzi bayibiza ngokuba 'rping' sele ikho ixesha elide kwaye uQuincy Promes usandula ukunyusa umdlalo wakhe. Emva kokubhanxela kwindawo yehip-hop, ubuntu bakhe kwezolonwabo bumbone ehambisa amagxa kunye nezinye igrisi kushishino olufana neBusta Rhymes.
UQuincy uzisa uthando ngoRipe umbone ethoba amagxa ngeBusta Rhymes. Imboleko yeMoto- i-Instagram
Ngaphandle kwamathandabuzo, uQuincy Promes sisikhuthazo kuluhlu olukhulayo lwabadlali abaphambili bebhola bebhola bebhayisekile ukusuka kwixesha langoku nelangoku.
I-AZ ye-Quincy Promes 'tattoos: Ngayo yonke imali eza naye xa eyinkosazana yehlabathi liphela, uQuincy Promes akathandabuzi ukuchitha umzimba wakhe kwii-tattoos. Unazo ii-tattoos ezininzi kumqolo wakhe wenziwe tattooUPharoah wase-Egypt". Kwicala lakhe ngaphambili kukho zonke iintlobo zokubhalwa kwe tattoo ezibonakalisa ubomi bakhe bangaphambili.
Ukuqonda uQuincy uzisa uMzobo-Umva wakhe kunye necala lakhe langaphambili. Ityala elinomfanekiso Twitter kwaye Instagram
Kuzo zonke ii-tattoos zakhe zeQuincy Promes, eyona nto ibaluleke kakhulu kubuciko bomzimba yinto emele ii-initials zakhe, zibhalwe ngokubhaliweyo njenge 'QP' Beka ngasemva kwentloko yakhe.
UQuincy uzisa i-tatto- Intloko yakhe kunye nokuQokelelwa kwesandla. Ityala elinomfanekiso Twitter
Okokugqibela uQuincy uzisa iNyaniso engenakugqitywa- Wayenendibano kunye neMidlalo yeBhola eKhatywayo yaseBrazil, Pele- Ngexa wayeyinkwenkwana, abazali bakaQuincy Promes banceda unyana wabo ukuba abhalise ngokupheleleyo kwi-Ajax eyamnika ithuba lokudibana neNkosi yeBhola-Pele".
UQuincy Promes wayekhe wadibana noPele. Ityala elinomfanekiso Twitter
Phambi kokuba bajongane ubuso ngobuso ne-Legend yaseBrazil, uQuincy Promes wazithandabuza kancinane, ecinga ngento aza kuyithetha okanye ayibuze umntu owayekwayimbali. Ukwenza uMet Pele kufana nokudibana nomntu osencwadini.
QHUBEKA: Ndiyabulela ngokufunda iQuincy Promes yethu yeBuntwaneni kunye neNqaku le-Biology ye-Quold. Ku- LifeBogger, sizabalazela ukuchaneka kunye nokuthe tye. Ukuba ufumanisa into engakhange ilunge, nceda wabelane nathi ngokuphendula ngezantsi. Siya kuhlala sizixabisa kwaye sihlonipha izimvo zakho.
I-Frenkie de Jong Childhood Indaba I-Untold Biography Facts
I-Luuk de Jong yabantwana bebali kunye ne-Untold Biography Facts
INdaba Ake Ake yabantwana Ingxelo Plus Untold Biography Facts
Ibali le-Daley Blind yoBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
UGeorginio Wijnaldum Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
URobin van Persie Ibali leNtsapho kunye neNdawo engabonakaliyo